Petrology: ihe ọ bụ, njirimara, ihe ọ na-amụ na ọtụtụ ndị ọzọ | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ngalaba nke geology nke na-elekwasị anya n'ịmụ banyere nkume n'ozuzu ya. Ọ bụ ihe gbasara petrology. Ebumnuche bụ isi nke sayensị a bụ ịmụ njirimara nke geometric, njirimara petrographic, ihe ndị mejupụtara ya, ngwakọta kemịkal zuru ezu na mineral dị iche iche nke mejupụtara nkume. Ọ dị ezigbo mkpa maka ọmụmụ banyere mpaghara mpaghara dị iche iche mejupụtara usoro okike.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, ọmụmụ na ebumnuche nke petrology.
2 Mmekọrịta gbasara ohere gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya
3 Ihe omumu na ihe omimi
Mgbe anyị na-ekwu maka petrology anyị na-elekwasị anya n'ịmụ banyere nkume n'ozuzu ya. Gbalịa ịmata ọnọdụ ndị ahụ usoro ihe omumu nke ihe eji eme ihe na ihe ndi ozo bu ihe ndi ozo n'eme ha. Enwere otutu ihe omuma banyere ihe omuma banyere uzo anya nke nkume nile. Iji mee nke a, ọ na-eji microscopy na-enwu enyo, nke na-eji ìhè ebufe, ọ bụ ezie na ọ na-egosipụtakwa na ụfọdụ. Ihe omumu ndia nile n’enye otutu ihe omuma banyere odidi nke ihe ndi ozo, dika ihe omimi, otutu ha, odidi ha na oke ha.
Njirimara ndị a niile na-enyere aka ịkọwa nkume dị iche iche ma guzobe ọnọdụ niile tozuru etozu na etu e siri hibe ha. Ejirila usoro okike dị iche iche mepụta ụfọdụ okwute a na-ahụkwa na petrology. Ngwongwo ihe ndi ozo bu ihe mejuputara okwute ahu ma nwekwaa aru. Ihe ndị a bụ mkpụrụ osisi ịnweta, otu mkpakọrịta nke ụfọdụ mineral na mpempe akwụkwọ ndị ọzọ metụtara mkpụrụ ndụ ihe nketa ma ọ bụ na ọ bụghị. Fọdụ na-eme na ụdị okwute niile dị ka mkpụrụ osisi ịnweta ma ọ bụ pores. Ndị a bara ụba na nkume na-edozi ahụ na ugwu mgbawa ugwu. Otú ọ dị, ha dị obere na nkume na-egbu mmiri na plutonic igneous rocks.
Offọdụ n'ime ha na-adị naanị n'ụfọdụ ụdị okwute dịka iko mgbawa ugwu dị na ugwu mgbawa mgbawa ugwu. Ndị ọzọ na-eme naanị oge ụfọdụ, dịka mgbawa.
Mmekọrịta gbasara ohere gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Taa, anyị ga - amata ọdịiche dị iche iche nke mmekọrịta mmekọrịta gbasara ohere na petrology. Nke mbụ bụ udidi. Ọ bụ usoro nke mmekọrịta mmekọrịta gbasara ọdịnala na njirimara ọdịdị nke nkume. Nke a bụ ebe ọka dị na mkpokọta nkume na ịnweta. Enwere ike ịsị na akụrụngwa nke okwute ahụ bụ nke na-enye ya ụdị ọdịdị ya. Ntuziaka dị na nhazi na njirisi ejiri mata ihe ndị a dịgasị iche dabere na ụdị nkume a ga-amụ.
Enwere otutu uzo di iche-iche nke nmekorita ihe banyere ihe banyere ihe banyere aru ala, obu ezie na enwere ike guzobe udiri akwukwo ndi ozo nke 5 nke na-eje ozi na ihe ndi ozo. Ka anyị hụ ihe ụdị textures na njikọ dị iche iche a na-ahụkarị:
Usoro ederede: a makwaara ya site na aha nke serial na ọ bụ nke nkume nwere kristal nke toro site na mmiri mmiri. Ihe omuma atu nke a bu site na magma ma obu oke mmiri. Nkume nkume na-etolite n'oge dị iche iche ma yabụ nwere ụdị ọdịdị dị iche iche. Typedị ụdị a na-adabara ụdị okwute niile, ọ bụ ezie na ọ na-ahụkarị ụdị plutonic na nke mgbawa ugwu na ụfọdụ nkume na-edozi ahụ.
Vitreous udidi: Ọ bụ udidi nke na-egosipụta okwute ndị ahụ nke enyo kpamkpam ma ọ bụ nke ejiri mee ha ma mee ya site na ngwa ngwa nke agbaze magma. Ọ na-ahụkarị nke yiri ugwu ndị na-agbọpụ ọkụ.
Ihe ederede: Ọ bụ nke a na-etolite site na iberibe okwute na mineral nke gụnyere ma ọ bụ n'ime ihe dị mma, nke agbachapụrụ na / ma ọ bụ nke enwetaghachila. Texturedị a na-emetụta okwute na-emebi emebi, n'agbanyeghị na ụfọdụ ugwu mgbawa na-ewetakwa ya. A na-akpọ iberibe nkume na mineral dị iche iche.
Blast udidi: Ọ bụ nke ejiri kristal mejupụtara na usoro siri ike. E meela ya site na mgbanwe nke mineral ndị dị ugbu a. Typedị udidi a na-ahụkarị ka ọ dị karịa na okwute metamorphic. A na-akpọ mkpụrụ ọka ndị a na-etinyeghachi na ya blast.
Ihe omumu na ihe omimi
Mgbe ị na-akọwapụta ọrụ nke petrology na kristal, anyị na-ahụ na e nwere ụfọdụ echiche. Ma ọ bụ na nhazi ihu igwe nke anyị kpọtụrụ aha na mbụ banyere ihe niile mejupụtara yana ihe kristallographic nke mineral n'ime nkume, ka a na-amụ na ngalaba abụọ ahụ. Ka anyị lee ihe a ga-elebara anya maka mkpebi nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụdị ndị dị ugbu a:
Isotropic: Ọ bụ otu nke na-enweghị ọkacha mmasị na nghazi nke ihe ndị mejupụtara ya.
Linear: Ọ bụ otu n'ime ya nke nghazi nke ihe ndi ozo nwere uzo kachasi.
Atụmatụ: ọ bụ nghazi nke ihe mejupụtara ya n’otu ụgbọelu.
Njikọ ụgbọelu: Ọ bụ nghazi nke ihe ndị mejupụtara n'otu ụzọ na n'ime otu ụgbọelu.
Anyị na-ahụkarị na nkume adịghị mma, yabụ ihe izizi ndị izizi enweghị ike ịbelata ịdị otu a. Dị ka ọ dị, ha na-akwụsị ịbụ nrụrụ plastik. Nrụrụ ekwuru sitere na nrụgide nke mere na e doro ihe ndị mejupụtara ya. Imirikiti nkume ndị dị na metamorphic na-eweta ụlọ ọrụ dịgasị iche iche. N'ihe banyere ụfọdụ marble anyị na-ahụ na ha na-eweta ihu ọma ọkachasị nke morphological na crystallographic nke mkpụrụ ọka calcite. N'aka nke ozo, mmasi amachibidoro ihe ndi ozo aghagh idi site na ngbanwe nke onodu siri ike.
Anyị na-ahụkarị na ụdị nkume dị iche iche nke mmekọrịta bimodal nke dị n'etiti ihe ndị siri ike. Eta pụtara na ụfọdụ nwere ahịhịa dị arọ karịa ndị ọzọ. A na-akpọ ọnụọgụ nke ihe niile kachasị mma. Echiche a nwere echiche dị iche iche dabere na nkume a na-etinye n'ọrụ. N'aka nke ọzọ, echiche nke simenti na-emetụtakwa kpọmkwem na nkume njikọ sedimenti nke gbanwere ụdị ọ bụla.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere petrology na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Petrology
Afọ 10 ka ihe ọghọm Fukushima gasịrị